Duulimaadyada Bariga Dhexe waxa ay noqonayaan Airbus Skywise Health Monitoring macmiil cusub
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Airlines » Duulimaadyada Bariga Dhexe waxa ay noqonayaan Airbus Skywise Health Monitoring macmiil cusub
Airlines • Airport • Aviation • Jebinta Wararka Yurub • Jebinta Wararka Caalamka • Jebinta Wararka Safarka • Safarka Ganacsiga • Wararka Lubnaan • News • Dadka • Waajib ah • Ammaanka • Technology • Dalxiiska • Gaadiidka • Warka Safarka Safarka
Duulimaadyada Bariga Dhexe waxa ay noqonayaan Airbus Skywise Health Monitoring macmiil cusub.
Isticmaalka madal xogta duulista ee Skywise, SHM waxa ay ururisaa oo ay dhexdhexaadisaa digniinaha, saamaynta sagxada duulimaadka, fariimaha dayactirka iwm., waxa ay kala mudnaan siisaa, waxa ay xidhiidhisaa wixii khaladaad ah ee nidaamka cilad-raadinta ee la xidhiidha.
Duulimaadyada Bariga Dhexe ayaa xalka u isticmaali doona dhammaan duulimaadyadeeda.
Diyaarada fadhigeedu yahay Beirut waxa ay ka shaqaynaysaa diyaarad dhan Airbus oo ka kooban A320 iyo A330 diyaarada qoyska.
Airbus SHM waxay badbaadisaa wakhtiga iyo kharashyada la xidhiidha dayactirka aan la qorshayn.
Middle East Airlines (mea) waxa uu saxeexay heshiis uu ku biirayo bulshada isticmaala Skywise Health Monitoring (SHM).
Taagan dheer Airbus Macmiilku waxa uu noqonayaa diyaaraddii 50-aad ee adeegsasata qalabkan cusub si ay u wanaajiso dayactirka diyaaradaheeda. SHM waxay taageeri doontaa dayactirka iyo kooxaha injineernimada ee diyaaradda iyadoo awood u siinaysa maamulka waqtiga dhabta ah ee dhacdooyinka diyaaradaha iyo cilad-saarka.
Isticmaalka madal xogta duulista ee Skywise, SHM waxa ay ururisaa oo ay dhexdhexaadisaa digniinaha, saamaynta sagxada duulimaadka, fariimaha dayactirka iwm., waxa ay kala mudnaan siisaa iyaga, waxa ay la xidhiidhaa wixii khalad ah ee habraacyada cilad-doonka ee khuseeya. Waxa kale oo ay muujisaa saamaynta hawlgalka, waxay bixisaa taariikhda dayactirka nidaamka (laga soo bilaabo buug-yaraha iyo macluumaadka MIS ee lagu ururiyay Skywise Core oo lagu kaydiyay harada xogta), taasoo u oggolaanaysa dabagal wax ku ool ah oo digniinaha ah. Intaa waxaa dheer, waxay ka caawin kartaa shirkadaha diyaaradaha inay saadaaliyaan iyo bixinta agabka iyo qaybaha 'diyaaradaha ugu dhow'.
mea waxay u isticmaali doontaa xalka dhammaan maraakiibteeda. Shirkadda diyaaradaha ee fadhigeedu yahay Beirut waxay ku hawlan tahayAirbus diyaarad ka kooban A320 iyo A330 diyaarada qoyska.
Airbus SHM waxay badbaadisaa wakhtiga iyo kharashyada la xidhiidha dayactirka aan la qorshayn. SHM waxa kale oo ay isku xidhaasaa Dayactirka Saadaasha Skywise (SPM) iyo Skywise Reliability (SR) si ay u bixiso khibrad isticmaale oo isku dhafan. Intaa waxaa dheer, waxay diyaar u tahay in ay ka faa'iidaysato awoodaha xoogga leh ee cusub ee hawlgalka Duulimaadka Duulimaadka iyo Sarriflayaasha Dayactirka ("FOMAX") xogta router - kaas oo qaban kara oo duubi kara in ka badan 24,000 oo cabbirrada diyaaradaha waqtiga-dhabta ah ee falanqaynta xigta.
Smith Oliver wuxuu leeyahay,
Diisambar 9, 2021 at 07:10
Isticmaalka xogta waqtiga-dhabta ah, warbixinnada miiska caawinta iyo cabbirada ayaa kuu oggolaanaya inaad cabbirto sida ay macaamiishu u dareemayaan miiskaaga caawinta. Warbixintu waxay soo saartaa warbixinno la habeeyey si ay kaaga caawiyaan cabbirka iyo hagaajinta waxtarka. Freshworks Consultant at https://www.techloyce.com/freshworks-integrations/ waxay kaa caawin kartaa habaynta socodka shaqadaada, marinka macmiilka, iyo doorarka wakiilka si loo daboolo baahiyaha gaarka ah ee shirkaddaada.